Nimco macallin ugu wanaagsan, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Naxdin nimco run ah waa fadeexad. Nimco ma cudurdaarto, laakiin waxay aqbashaa dambiilaha. Waa qayb ka mid ah dabeecadda nimcada oo aynaan mudnayn. Nimcada Ilaah ayaa nolosheena beddela oo waa waxa iimaanka Masiixiyiintu ku saabsan yahay. Dad badan oo la soo xiriira nimcada Ilaahay ayaa ka baqaya in sharciga ka hooseynin. Waxay u maleynayaan inay tani ka dhigeyso inay sii dembaabaan. Bawlos waa laga hor yimid aragtidan oo waa laga jawaab celiyay: «Sidee hadda? Waxaynu ku dembaabnaa sharciga maxaa yeelay, waxaynu ku hoos jirnaa nimco, sharciga ka hooseeya. Taasi waa fogaan! »(Rooma 6,15:XNUMX).
Waxaan dhawaan maqlay sheeko igu kalifay inaan ka fikiro nimcada Eebbe iyo waxa ka dambeeya. Aroortii hore aabbe iyo wiilkiisii ​​waxay galeen magaalada. Waxay ku noolaayeen meel 40 kiiloomitir waqooyi ka xigta Durban, ee Koonfur Afrika. Aabuhu wuxuu rabay inuu gaadhiga sii hayo oo uu ka shaqeeyo dhinaca kale ee magaalada. Markay magaalada yimaadeen, aabihii wuxuu uga tegey wiilkiisii ​​si uu ganacsi u sameeyo. Wuxuu faray wiilkiisa inuu ku kaxeysto gaariga garaashka uu ku ballansanaa adeegga. Waxaa la rabay inuu dib ugu laabto aabihiis ka dib markii garaashku u adeegsaday gaariga si uu gurigiisii ​​ugu laabto.
Wiilki wuxuu ku kaxeeyey garaash baabuur baabuurna diyaar buu u ahaa aruurinta galabtii. Wuxuu hubiyay saacadihiisii ​​wuxuuna moodayay inuu ku daawan doono filim masraxa masraxa ku yaal geeska ka hor inta uusan soo qaadin aabihiis. Nasiib darrose, qulqulatadan ayaa ahayd mid ka mid ah filimaannada xiisaha badan ee socday laba saacadood iyo badh. Markuu soo baxay qorraxduna way soo baxday.
Dhanka kale ee magaalada, aabihiis wuu walwalsanaa. Wuxuu u yeeray garaash si wax looga weydiiyo halka uu ku sugan yahay wiilkiisa. Wuxuu gartay in wiilku bilaabay inuu wado baabuur dhawr saacadood ka hor (taasi waxay ahayd maalmihii ka horreeyay taleefanka gacantu). Markay gudcur noqotay, ayaa wiilkii yimid oo aabbihiis soo kexeeyey;
Xagee joogtay Aabihii ayaa weydiiyay. Maadaama uusan wiilku ogeyn inuu aabihiis mar hore u yeeray garaashka, wuxuu ku jawaabay: «Waxoogaa bay ku qaadatay garaashka. Markii aan halkaa imid, waxay durba ku mashquulsanaayeen baabuurta kale. Markii dambe waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan gaadhigeenna ». Wuxuu sidan ku yidhi weji daran oo ah in aabihiis rumaysan lahaa beenta hadii uusan runta aqoon.
Isagoo wejiga murugeysan ayaa wuxuu aabihii ku yiri: «Wiilyahow, maxaad been iigu sheegaysaa? Garaaca ayaan wacay waxayna ii sheegeen inaad ka tagtay dhawr saacadood ka hor. Waxaan kugu barbaariyey inaad tahay nin daacad ah. Waxay umuuqataa inaan si muuqata u fashilmay. Hadda waxa aan ku socdaa guriga oo aan isku dayaa in aan ogaado waxa aan ku khaldamay barbaarinteyda, maxaa kugu been uga dhigay sidan oo kale ”.
Isaga oo ereyadan leh, ayuu u leexday oo lugaynaya 40 km guriga! Ninkii dhallinyarada ahaa ayaa istaagay isagoo aan ogeyn waxa la yiraahdo ama waxa la sameeyo. Markuu garawsaday, wuxuu go’aansaday inuu si tartiib tartiib ah gadaal ugu kaxeeyo aabihiis, isaga oo rajeynaya in waqti uun uu maskaxdiisa ka beddelo oo uu gaariga galo. Saacado badan ka dib, aabihii wuxuu galay guriga, wiilkii aabihiisna baabuur ku raacay baabuur ayuu u tegey inuu gaariga dhigto. Wiilkan ayaa yidhi markii laga soo bilaabo maalintaas waxaan go aansaday in aanan been u sheegin aabbahay,
Dadka intooda badani ma fahmaan wixii dembigu ku sameeyey iyaga. Markii aad ogaatid xaddiga, waa waxa ugu dambeeya ee aad naftaada ku rabto.
Waxaan u maleynayaa inay tahay sheeko caadi ah oo nimco ah. Aabuhu wuxuu go’aansaday inuusan ciqaabin wiilkiisa beenta. Si kastaba ha noqotee, wuxuu go'aansaday inuu xanuunka u qaado wiilkiisa. Taasi waa nimco - nimcadii aan la istaahilin, naxariis, jacayl iyo cafis. Aabeheenna Jannada ayaa sidaas yeelay oo keliya. Markay dadku dembaabeen, wuxuu inagu jeclaaday si aad ah oo uu u siiyay wiilkiisa keliya oo dhashay si aan uga badbaadi karno dembiga iyo dhimashada annagoo rumaynayna. Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyay wiilkiisa keliya oo dhashay in kuwa isaga rumaystaa aysan lumin laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah (Jn 3,16:XNUMX). Xanuunkii ayuu naftiisa u qaaday. Xaqiiqada ah in aabuhu si dulqaad leh ugu jawaabo kor u qaadida beenta iyo dembiyada badan? No! Ka jawaabida dembiga micnaheedu maahan fahmitaanka waxa dhacay.
"Waayo, nimcooyinka bogsashada ee Ilaah ayaa u muuqday dadka oo dhan wuxuuna ina baray inaan diidno jaahilnimada iyo damacyada adduunyada oo aan ugu noolaano dunidan hab caqli leh, xaq ah oo cibaado leh" (Tiitos 2,11: 12-XNUMX). Halkii ay na bari lahayd inaan inbadan dembaabno, nimcadu waxay ina baraysa inaan dhahno denbiga oo aan u hogaansanno nolol is xakameysa, qumman oo Ilaah hanuuniya!
Sidee nimcadu taas u sameysaa?
Aad bay noogu adagtahay aadanaha inaynu fahamno saamaynta iyo xanuunka ay dembiga iyo xidhiidh la’aan la soo baxeen. Waa sida balwadda maandooriyaha oo noloshiisa ay ku burburiyeen daroogo. Haddii aabaha u naxariisto oo uu wiilka ka soo bixiyo godka daroogada oo uu ku soo noqdo, waa wax aan macquul aheyn in wiilku doonayo inuu mar labaad qaato daroogada isla marka uu ka soo baxo reeraha si aabuhu naxariis badan u muujiyo. Macno malahan.
Mar haddii aan fahanno wuxuu Aabaha noogu sameeyay Ciise Masiix, waxa dembigu yahay iyo waxa dembigu nagu sameeyey iyo waxa ay weli nagu sii wadaan, jawaabteena waa maya! Dambigeen dambe kuma sii dembaabno si nimcadu badato.
Nimco waa eray qurux badan. Waa magac qurux badan oo macnaheedu yahay nimco ama naxariis. Dumaashid magaceedu waa Grace. Markasta oo aad maqashid ama aad aqriso magaca Grace, xusuusnow waxay rabto inay ku baraan. Fadlan xusuusnow in nimcadu ayan ahayn oo keliya “badbaadada”, laakiin sidoo kale ay tahay in nimcada, iyo dabeecadda naxariistu ay tahay macallin raba inuu ku baro oo ku baro!
Waxaa qoray Takalani Musekwa